IHhovisi likaMengameli seligxeke ‘ukuhlaselwa’ kwaZuma wuMadonsela | News24
IHhovisi likaMengameli seligxeke ‘ukuhlaselwa’ kwaZuma wuMadonsela
Cape Town – UMvikeli woMphakathi osethathe umhlalaphansi, uThuli Madonsela, kumele aziqhelelanise nokuphawula ngombiko wokulawulwa koMbuso njengoba lingasekho iqhaza alibambayo kuwona, kusho iHhovisi likaMengameli ngoLwesihlanu.
Leli hhovisi lithi izitatimende ezilokhu ziqhubeke njalo zikaMadonsela ezithinta uMengameli Jacob Zuma kanye nombiko wakhe wakamuva ziyakhathaza.
“Ukuhlasela kwakhe umengameli emphakathini okungagunyaziwe, njengoba kwenzekile eStellenbosch ngoLwesine, akufanelekile futhi akusizi,” kusho okhulumela iHhovisi likaMengameli uBongani Ngqulunga.
Uqhube wathi kungaba kuhle ukuthi uMadonsela ahlehle manje ukuze adedele ukuqhubeka kwemigudu yezomthetho kanye noMthethosisekelo ngaphandle kokuphazanyiswa.
UNgqulunga uthi bakhathazekile ngesenzo sikaMadonsela sokuputshuza ingxoxo eqoshiwe ngenkathi epheka umengameli Zuma ngemibuzo ngesikhathi enza uphenyo mayelana nezinsolo zokulawulwa koMbuso umndeni wakwaGupta, osondelene kakhulu nomengameli.
Uthi kuyaxaka ukuthi kungani uMadonsela aputshuza ingxoxo noZuma kuphela ekubeni aba nezingxoxo nabantu abaningi.
Iphephandaba, iThe Citizen, labika ukuthi uMadonsela watshela izethameli kwingqungquthela yaminyaka yonke i-Association of Black Securities Investment Professionals ukuthi waputshuza le ngxoxo ngenhloso yokuveza obala ukuthi wamunika uZuma ithuba lokuphendula imibuzo ophenyweni lwakhe.
Ngaphambilini uZuma wathi uMadonsela akazange amnikeze ithuba lokuthi aziphendulele imibuzo ngezinsolo ezikulo mbiko.
NgoLwesithathu, i-ANC yanxusa ukuba uMvikeli woMphakathi omusha, uBusisiwe Mkhwebane, aphenye uMadonsela ngokuputshuza lo mbiko.